गुगलको खाता किन आवश्यक छ र कसरी बनाउने ? Why do we need Google Account & How to create one for you? गुगलको खाता किन आवश्यक छ र कसरी बनाउने ? Why do we need Google Account & How to create one for you? - Asyan Tech Udhyog
Posted6months ago / Google
तपाई हामीलाई अवगत नैै छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो मोबाईलको प्लेटफम, एन्ड्रोइड हो भनेर जसलाई गुगलले बजारी करण गरेको हो । एन्ड्रोइड मोबाइलहरुमा सबै जसो क्रियाकलापहरु गुगल सँगै जोडिएको हुन्छन् । गुगलमा खाता बनाउनै पर्ने हो ? भन्ने चाहि होइन त्यो तपाइको रोजाइ हो ।
तर गुगलमा खाता बनाएर तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइलमा राखे पछि के–के सुविधा हुन्छ त्यो जानी राख्न जरुरी छ । सर्बप्रथम तपाईको अमूल्य साथी भाईका फोनहरु कहिले पनि हराउने छैनन् । तपाईको मोबाईल फोन किने देखिको पहिलो तस्बिर देखि मोबाइल जिर्न अवस्था पुग्दा सम्म सुरक्षित हुनेछन् । तपाईको मोबाइल यदि हरायो भने पनि तपाईको गुगल एकाउन्तबाट सोझै भेटाउन सकिन्छ । तपाईको सधै प्रयोग हुने इमेल, नक्सा, संगित, भिडियो कल आदि थूप्रै कुराहरु प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ । यो लगायत तपाईको महत्वपूर्ण कगजातहरु जस्तै तपाईको सी.भी., बायोडेटा, पासपोर्त फोतो आदि राख्नका लागि गुगले गुगल द्राईबमा १५ जी.बी. निसुल्क दिन्छ । गुगल खाता बनाउनको लागि निम्न तस्बिरहरुमा देखाए बमोजिम गर्नु होला ।
भिडियो हेरेर गुगल खाता खोल्न सक्नुहुन्छ
आफ्नो मोबाइलको सेतिङमा जानु होस र गुगल अथवा “Add Account” भन्ने अपसन हुन्छ त्यसमा किल्इिक गर्नु होस
यदि तपाईको गुगलको खाता भने आफ्नो इमेललाई ताईप गर्नु होस अथवा “Create Account” भन्ने अपसनमा किल्इिक गर्नु होस
त्यस पछि तपाईका सम्पूर्णहरु ताईप गर्नु होस
अनि आफ्ना इमेल रोज्नु होस वा ताईप गर्नु होस
आफ्ना इमेलको लागी पासर्वड ताईप गर्नु होस
“I Agree” अपसनमा किल्इिक गर्नु होस
यति गरे पछि तपाईको गुगल खाता तयार हुन्छ
gmail, google account, google drive, google duo, google map